Humane and Zimbabwe - Animal Rights Zone
War and chaos is bad for everyone, human and non-human. In Zimbabwe, activists claim impoverished Zimbabweans are killing elephants and eating them. Tags: bush meat poaching zimbabwe wildlife Out-of-control poaching is apparently wiping out all sort of wildlife, including hippos. MORE
Zimbabwe Wildlife 2008 Non Human 100
Humane Zimbabwe Related Topics
Non Human Wildlife Meat Killing Tagged Elephants 2008 More Related Topics >
War and chaos is bad for everyone, human and non-human. In Zimbabwe, activists claim impoverished Zimbabweans are killing elephants and eating them. Tags: bush meat poaching zimbabwe wildlife Out-of-control poaching is apparently wiping out all sort of wildlife, including hippos.